Articles tagged 'rhodesia'
Not yet Uhuru, Tsvangirai says 19 April 2017 HARARE - Opposition leader Morgan Tsvangirai has challenged President Robert Mugabe to stop his warring ruling Zanu PF's mindless bloodletting and instead focus on giving long-suffering Zimbabweans “real freedom” and a better life. In addition, Tsvangirai also reiterated in his independence me...
'Our liberators freed us in order to capture us' 19 April 2017 HARARE - As Zimbabweans celebrate 37 years of independence, the Daily News spoke to a number of people with diverse interests to find out how our journey has been so far. Zimbabwe's independence is celebrated on April 18 each year since President Robert Mugabe was voted into office in 1980. ...
How Zim shaped SA rugby 4 March 2017 HARARE - Although the Springboks have won two Rugby World Cup titles, there is little doubt that Zimbabwe has helped shape South African rugby over the decades. So many international stars from the then Rhodesia and later independent Zimbabwe have crossed the Limpopo to go and earn legendary s...
War vets demand answers from Mugabe 17 November 2015 HARARE - War veterans want President Robert Mugabe to establish a commission of enquiry to flush out senior Zanu PF officials with Rhodesian connections holding onto land in and around the country's urban centres on behalf of “ex-Rhodies”. Speaking at a press conference yesterday, Zimbabwe Na...
'Apartheid South Africa kept Rhodesia alive' 27 July 2014 HARARE - Apartheid South Africa and Rhodesia had a closer tourism relationship between its white citizens compared to independent South Africa and Zimbabwe today, a Cabinet minister has sensationally revealed. Tourism and Hospitality minister Walter Mzembi told a gathering in Harare this week...